Nay Nyo Chan: Lesson-2- Relationship
Over time, some of these may become good friends or close friends – these collocations
refer to friends with whom you have an especially strong relationship.
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ သာမာန်မိတ်ဆွေတွေထဲက တစ်ချို့မိတ်ဆွေတွေဟာ မိတ်ဆွေကောင်း good friends ဒါမှမဟုတ် မိတ်ဆွေရင်း close friends တွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီ မိတ်ဖက်တွဲလုံး တွေကတော့ ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံရေး အကျွမ်းတ၀င်ရှိတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။
Do you believe in love at first sight? That’s when two people meet each other and immediately fall in love – perhaps because they have strong chemistry – this expression describes strong compatibility or connection between two possible romantic partners.
ချစ်ခြင်းအစ မျက်စိက love at first sight ဆိုတာ ယုံပါသလား။ ချစ်ခြင်းအစ မျက်စိက ဆိုတာ လူနှစ်ဦး စတွေ့ပြီး မြင်မြင်ချင်း ချစ်ကြိုက်သွားတာ fall in love ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့မှာ ဖူးစာ strong chemistry ပါလာတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖူးစာဆိုတာ ချစ်သူတွေဖြစ်လာဖွယ်ရှိတဲ့ နှစ်ဦးအကြား လိုက်ဖက်မှုရှိတာ၊ ရေစက်ရှိတာကို ဖော်ကျူးပါတယ်။
Some people believe that their significant other (their boyfriend, girlfriend, husband, or wife) is their soul mate – this isapoetic expression that means that two people are destined to be together.
တစ်ချို့လူတွေက သူတို့ရဲ့ ကြင်ဖော်ကြင်ဖက် (ချစ်သူကောင်လေး၊ ချစ်သူကောင်မလေး၊ လင်၊ ဇနီး) significant other ဟာ သူတို့ရဲ့ လက်တွဲဖော် စိတ်တူကိုယ်မျှအဖော် soul mate ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ soul mate ဆိုတာ ကဗျာဆန်တဲ့အရေးအသားဖြစ်ပြီး နှစ်ဦးအတူဆုံဆည်းဖို့
It’s possible for one person to have feelings for another person – this expression is an indirect way to describe romantic feelings –
လူတစ်ယောက်အတွက် အခြားတစ်ယောက်ကို have feelings for ချစ်ပိုင်ခွင့် ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီဖော်ပြချက်က ချစ်တဲ့စိတ်ကို သွယ်ဝှိုက်တဲ့နည်းနဲ့ဖော်ပြတာပါ။
but if the other person doesn’t feel the same way, then the feeling is not
ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်လူက ပြန်မချစ်ဘူးဆိုရင်တော့ (ကိုယ်ခံစားရသလို မခံစားရဘူးဆိုရင်တော့) အဲဒီအချစ်က နှစ်ကိုယ်တူအချစ် မဟုတ်ဘူးပေါ့။(ခံစားချက်ခြင်းမတူဘူးပေါ့) the feeling is not mutual.
The other person might say “he’s/she’s just not my type” – meaning that they are interested in people ofadifferent type of personality/appearance.
တစ်ဖက်လူက သူက ငါနဲ့ လိုက်ဖက်တာမှ မဟုတ်တာ (ငါလိုချင်တဲ့ပုံစံ မဟုတ်ဘူး) he’s/ she’s just not my type လို့ ပြန်ပြောမှာပေါ့။ သူနဲ့ မတူညီတဲ့ အရည်အချင်း အရည်အသွေးရှိတဲ့သူကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတာလို့ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Ah, there’s nothing sadder than unrequited love! (Love that is not returned)
အဲ….. တစ်ဖက်သက်အချစ် unrequited love ထက် ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာ ဘာမှ မရှိတော့ပါဘူး။ (အပါယ်ခံအချစ်)
Some people marry their childhood sweetheart or high school/college sweetheart – this expression refers toaboyfriend or girlfriend from your childhood, teenage, or college years.
တချို့လူတွေကြတော့ သူတို့ရဲ့ ငယ်ရည်းစား childhood sweetheart သို့မဟုတ် အထက်တန်း ကျောင်းသားဘ၀၊ ကောလိပ်ကျောင်းသားဘ၀မှာ ရခဲ့တဲ့ ရည်စား high school/college sweetheart ကိုပဲ လက်ထပ်ကြတယ်။ ကလေးဘ၀၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၊ ကောလိပ်ကျောင်းသားဘ၀တွေမှာ ရခဲ့တဲ့ ချစ်သူ၊ ရည်းစားကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Other couples are introduced byamutual friend – one friend that the two people have in common.
အခြားအတွဲတွေကိုတော့ နှစ်ဖက်လုံးကိုခင်မင်တဲ့မိတ်ဆွေကပဲ mutual friend မိတ်ဆက်ပေးလိုက် တာပါ။ နှစ်ယောက်လုံးက ခင်မင်တဲ့မိတ်ဆွေ။
When the couple is ready to makeacommitment, the man proposes to the woman – he asks her to marry him.
ချစ်သူနှစ်ဦး ဂတိသစ္စာပြုဖို့ makeacommitment အဆင်သင့်ဖြစ်ချိန်မှာတော့ ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို လက်ခွင့် proposes to the woman တောင်းပါတယ်။
If the marriage is good, then we say the couple is happily married.
အိမ်ထောင်ရေး သာသာယာယာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ချစ်သူနှစ်ဦး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လက်ထပ်တယ် happily married လို့ ပြောပါတယ်။
Unfortunately, not all love stories haveahappy ending. Sometimesahusband or wife has an affair – they have sex withadifferent person.
ကံဆိုးတာက အချစ်တိုင်း ပျော်ရွှင်တဲ့အဆုံးသတ် မရှိဘူး။ တစ်ခါတရံမှာ လင်ဖြစ်စေ၊ ဇနီးဖြစ်စေ တစ်ယောက်ယောက်က လိင်ဖောက်ပြန်တယ် has an affair ။ အခြားသူနဲ့လိင်ဆက်ဆံတယ်။
We can also say that they are cheating on their husband/wife.
သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ယောင်္ကျား၊ မိန်းမအပေါ် လှည့်စားတာ cheating on their husband/wife လို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။
have an affair ဆိုတဲ့အသုံးကိုတော့ အိမ်ထောင်ရှင်တွေအတွက်ပဲ သုံးပြီး cheating on ကိုတော့ အိမ်ထောင်ရှင်တွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်သူ၊ရည်းစားတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
1. The process of creating friendships is called...
a) getting friends b) earning friends c) making friends
2. A "close friend" is someone...
a) who lives near you b) who is similar to you c) with whom you haveastrong friendship
3. When you develop romantic feelings for another person, you're...
a) becoming passionate b) falling in love c) giving your heart
4. If only one of the two people has romantic feelings, we say the feeling is not...
a) mutual b) returned c) together
5. A polite way to say you're not attracted to someone is: "He/she's not my..."
a) kind b) style c) type
6. A man who marriesawoman who he met when both were very young, has married his childhood...
a) darling b) lover c) sweetheart
7. When two people get married, they makea___________ to each other.
a) commitment b) compromise c) guarantee
8. Many men try to findacreative and romantic way to __________ to their girlfriends.
a) propose b) proposition c) purpose
9. A lot of marriages end when one member of the couple has an...
a)affair b) experience c) intimacy
10. If you catch your significant other in bed with another person, then he/she is _________ on you.
a) betraying b) cheating c) deceiving
Posted by Nay Nyo Chan at 7:38 AM